Ụbọchị My Pet » Top 4 Atụmatụ I Kwesịrị Ịmara Banyere dịwara
Top 4 Atụmatụ I Kwesịrị Ịmara Banyere dịwara
Anyị na-ejupụtakarịkwa na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Atụmatụ n'ebe nile anyị na-. Na a ụwa jupụtara ndị na-agbalị ịchọta onye o yiri ka ọ na onye ọ bụla chọrọ ka ha sịnụ. Na ya mgbe ha na-eme ya ụda otú mfe mgbe n'ezie na ọ bụ adịghị mfe mgbe nile. Ọ bụrụ na ọ bụ ndị anyị ga niile zutere nwoke ma ọ bụ nwaanyị nke anyị na nrọ mgbe niile. Ya mere m na-agaghị na-ekwu ihe dị ka “Ị dị nwere gafere ọ bụla na-egbochi gị na-aga maka ya.” n'ihi na ọ bụrụ na anyị nwere ike niile na-eme na anyị ga na-adịghị mkpa na-agụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụmọdụ. N'ihi ya, m na-adịghị azọrọ na abụ ọkachamara. Ihe m na-ekwu ga-enwe ike ịghọta. Anyị niile bụ ndị a na ọnụ.
Nke a bụ eleghị anya ihe kacha mkpa icheta mgbe ị na-abanye mkpakọrịta nwoke na nwaanyị egwuregwu. Ma, ọ bụkwa eleghị anya hardest-eme omume. M na-eche anyị na fọrọ nke nta niile ndidi ikpe aghọ ụzọ anyị na-eche na onye anyị na-amasị chọrọ ka anyị iji mmasị ha. Ma unu na-nanị mgbe na-aga ịhụ ezi ịhụnanya na ụzọ. Ezi ịhụnanya bụ a njikọ. Ọ bụ onye hụrụ gị maka kpọmkwem onye ị bụ na adoring gị maka ya. Mgbe niile ị na-aga na-aga site gị dum ndụ eme? Ma na nke a na-abịa a ọrụ. N'aka ị ga-nkwanye ùgwù nke ndị ha bụ. Ya mere ka ihe atụ ị pụrụ ịbụ a ike rocker ma ha na-amasị ndị cheesiest nke cheesiest na pop. I kwesịrị-akwanyere ha ùgwù dị ka ị ga-achọ ka ha na-akwanyere gị. Anwala ịgbanwe onye ọ bụla ọzọ. M anụwo ya site na ndị mmadụ na-adịru ogologo oge mmekọrịta. Ọ bụ ihe jọkariri njọ ị pụrụ ime. Ọ-eduga naanị iwe na obi ilu.
The Little ihe na-Kpọrọ
Ị ga-ikpe otú ị na-egwu nke a na na-na onye ahụ bụ n'ihi na ụfọdụ n'ezie dị ka ibu ogbugbu ma na-wined na eri nri! Ma nkịtị kwesịghị bụ na onye ọ bụla dị ka na mgbe ọtụtụ ndị ga-ahọrọ dị nnọọ a ederede arịọ otú ụbọchị ha bụ. M nụrụ ndị na-ekwu na tupu m agbasaghị na-ekweta na ya. A nnọọ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-ha a onyinye bụ na ị chọrọ ịmara ihe ihe ha na-amasị. Ọ na-egosi mmasị na ha na ndị ha bụ. The jenerik onyinye ndị dị otú ahụ dị ka okooko osisi, chọkọletị na aftershave / senti bụ ezi ná mmalite ma dị ka a na-aga n'ihu mmekọrịta ịkwa akwa gị onyinye na-a bit ọzọ mmadụ ka onye ị na-akpa.
Ee, nke a bụ ihe siri ike onye ma ọ bụrụ na i nwere a na-eme ihere àgwà. Ọ bụghị na n'okpuru na-eme ihere mputa na ọ dịghị akụ na ụba nke echiche bubbling (Ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime anyị na-dere!) ma ọ bụghị mgbe nile mfe inwe obi ike na-ekwupụta ha na ike inwe na n'ụzọ nke ị na-achọta ịhụnanya dị mwute n'ihi na mmadụ nwere iji mara gị. Nke ahụ bụ otú ha na-ekpebi ma ha na-amasị gị ma ọ bụ na ọ bụghị mbụ mma. O doro anya na-amasị ná ndụ, ịhụnanya bụ otu ihe ahụ na ị ga-mkpa iji nkịtị uche na ndụmọdụ nke ndị ọzọ mara ihe n'ọnọdụ gị kwesịrị igosipụta gị echiche na mgbe ọ kacha mma ka na-jụụ ma mgbe i nwere ike ka ha mara na onye ị bụ. Ị nwere ike ka na-enwe na-eme ihere. Nke ahụ nwere ike ịbụ mara mma. Ma na-agbali na-emeghe kwa. Na ụzọ aka na nke ahụ ga-eme a N'ezie na nkwukọrịta (ma ọ bụ ole na ole!), eme mgbede ọmụmụ, na-aga a toastmasters ma ọ bụ nanị nweta onwe gị si n'ebe a na-elekọta mmadụ ikuku dị ukwuu dị ka i nwere ike. Ọ bụ egwu ma ọ bụ ọnụ ahịa ya. Ka m na-mum mgbe nile, sị, ị kwesịrị ị na-akwụsị ndụ gị maka ndị ọzọ.
Buru onye ahụ Ị
A nnọọ nkịtị ihe na ndị na-eme bụ na ha na-eburu onye dabeere na ihe ezinụlọ ma ọ bụ enyi na-eche. Site niile pụtara ntị na ndụmọdụ ebe ndụmọdụ bụ ihe ezi uche dị otú ahụ dị ka ma ọ bụrụ na s / ọ bụ a ọgwụ ọjọọ riri ahụ ndị mmadụ na-eleghị anya achọ naanị gị. Ma, ndị mmadụ nwere ọchịchọ nke etinye onwe ha ụdị dị ka onye ọ bụla na ụdị na ụdị onye anyị na-aga n'ihi na bụ ihe pụrụ iche anyị. Ọ bụrụ na ị na-achọ a hippy ma ọ bụ a beatnik na ị na-mgbe-aga na-enwe obi ụtọ na a mba ọrụ ugbo na Anglịkan. N'eziokwu e nwere wezụga n'ihi na ụwa nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ na-ejighị n'aka ma n'ozuzu okwu anyị na-niile na-achọ onye dabara na anyị ma na anyị mkpa ịdị na-na onye ndị anyị bụ ala na na na-na-excites anyị. Ọ dịghị mma kemgbe na onye n'ihi na ha nwere ndị ị hụrụ n'anya’ akara nke ihu ọma. Ha abụghị ndị na-akpa ha. Ị na-. Na ị ga-agwa ha ihe ha na-eme otú adịghị ekwe ka ha na-eme mkpebi gị. Na ntụkwasị obi gị onwe gị mkpebi na uche gị. Gị onwe gị instincts ịhụnanya na-emekarị bụ ndị ziri ezi ndị.